Sida saacad loogu noolaado roulette
Runtii ma waxaad dooneysaa inaad ogaato sida saacadaha loogu sameeyo roulette-ka? Akhriso oo soo hel astaamaha Roulette Clock Master, softiweer gaar ah by ThatsLuck!
Sii deynta ugu horreysa tan qalab saacad roulette waxay dib ugu soo noqotey dhowr sano ka hor, markii casino khadka tooska ah markii ugu horreysay loo oggol yahay ciyaartoy inay sharad galaan ka dib markii croupier uu kubbada tuuray.
Aniga oo had iyo jeer si xiiso leh u akhriya qodobbada ku saabsan saadaasha muuqaalka ama qalabka, sidaa darteed waxaan go aansaday inaan isku dayo gacanteyda qaybtan ciyaarta, anigoo abuuraya barnaamij loogu talagalay in lagu xiro roulette-ka khadka tooska ah ee cinwaankeedu yahay Roulette Clock Master.
Sida loo saacado roulette online leh Roulette Clock Master
In ka badan saacad, Roulette Clock Master waa nooc chronometer, kaas oo isku dayaya inuu saadaaliyo meesha kubbada uu tuuray croupier ay ku dhamaan doonto orodkeeda ama jug hawo ciriiri ah oo ku saabsan roulettes otomaatig ah.
Sidee barnaamijku u saadaalinayaa tan? Awoodin farsamadan xiritaanka roulette anigoo ku xisaabtamaya cabir sax ah oo ku saabsan xawaaraha roulette iyo kubada sababo la xiriira cilladaha farsamo ee ku xiran gudbinta iyadoo la adeegsanayo shabakada fiidiyowga, waxaan go'aansaday inaan qaato mabda'a cabirka muuqaalka muuqaalka leh ee 'posteriori'.
Haddii aan xayiro fiidiyowga kadib dhowr millisekond oo laga bilaabo bilawga kubbadda oo aan ogaado booska roulette, kubbadda iyo lambarka guuleysta, mar kasta oo aan joojiyo fiidiyowga isla waqtigaas ka dib waxaan ogaadaa xaalado la mid ah kuwii ka hor la duubay, Waxaan filan karaa in natiijada kama dambaysta ahi ay la mid tahay ama xaalad kasta oo aad isugu eg (sanduuqyada ku dhaw) tii hore loo soo helay?
Jawaabtu, ka dib tijaabooyin badan oo goobeed, waa haa: haba yaraatee ma badna taas Roulette Clock Master, si ku habboon loo hagaajiyay, si sax ah u saadaaliyay xitaa hal lambar oo guuleysta.
Marka halkee dhibaatadu ka jirtaa? Maxaan u joogi waayey Bahamas muddo dheer anigoo kabasanaya shaambooga caliente playa? Waan kuu sharixi doonaa sadarka soo socda.
Sida loo saacadeeyo khadka tooska ah ee hawada leh hawo is dul saaran
Isagoo ka hadlaya roulette hawada ku cadaadiyey, ee optics xiritaanka roulette Runtii iyagu waa kuwa ugu fiican ee loo dhowaado, labadaba ilbiriqsiyada ilbiriqsiyeed ee loo heli karo dhacdooyinka, iyo aragti ahaan marka la eego qaabeynta saxanka wareegaya.
Si kastaba ha noqotee, roulettes-kan waxaa lagu qalabeeyaa qalab loo yaqaan RRS, ama Random Rotor Speed.
RRS-kan ayaa ficil ahaan wax ka beddelaya hoos u dhaca rotor-ka si aan kala sooc lahayn isla markaaba ka dib xiritaanka sharadyada, si looga fogaado in qof uu ka faa'iideysan karo suurtagalnimada sharad ka dib bilaabista kubbadda.
Ikhtiyaarka ayaa si cad loogu muujiyey buug-yaraha soo-saaraha inta badan buugyarahaan (haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, ka raadi shabakadda)Cammegh dambas).
Haddaba waa maxay Rajo malahan ciyaaryahanka?
Waxaan dhihi lahaa ka hor inta aan kor loo qaadin calanka cad ee leh ruugyadan, malaha tijaabooyinka qaarkood waa in la baaraa, sidoo kale maxaa yeelay kan cusub Roulette Clock Master waxaa lagu qalabeeyay ikhtiyaarka Xawaaraha Xawaaraha, taas oo ay suurtagal tahay in lagu bartilmaameedsado xawaaraha ugu badan ee qaybaha waaweyn ee giraangirta, taas oo markaa suurtagal ah in sidoo kale la aqbalo kala duwanaanshaha natiijada ugu dambeysa ee uu keenay Random Rotor Speed.
On roulette kubbadda hawada, si kastaba ha noqotee, had iyo jeer isticmaal dareenka ugu sarreeya, macnaheedu maahan in farshaxanka ganacsadaha uu ka sii fogaado kaliya gaabinta rotor.
Deji Video iyo Speed ​​Speed
Wixii dejinta ee Xawaaraha Xawaaraha waxaan kuugu gudbinayaa boostada ama fiidiyowga on YouTube barnaamijka ► Roulette Turbo Clicker, ficil ahaan nidaamku waa isku mid waana hubaal inuu yahay mid aad u fudud oo dhakhso leh in la dhammaystiro.
Sida qaabeynta bilowga ah ee fiidiyowga, si fudud u fur miiska ciyaarta, ka xulo cinwaanka daaqadda ciyaarta miiska hoos-u-dhaca oo guji badhanka set, markaa waad ku mahadsan tahay isku-duwaha X / Y waxaad aqoonsan kartaa qaybta fiidiyowga aad xiiseyneyso inaad qabato (X Bilow e Y Start) iyo cabirka daaqadda qabashada (guddi Cabbirka Qabashada).
Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale 'ku qasbi kartaa' cabirka daaqadda ciyaarta si aad uga dhigto mid ku habboon cabbirka desktop-kaaga (guddiga Cabirka Ciyaarta Daaqadda).
Sidan oo kale, haddii xitaa ka dib marka hore dejinta cabbirka daaqadda ay tahay inuu isbeddelo, waxaad ku sameyn kartaa kaliya hal guji badhanka Tweak dib ugu soo celi cabbirka hore loo doortay (Ballad / Dherer).
Farsamooyinka saadaasha qalabka
Marka laga hadlayo farsamooyinka suurtagalka ah (iyo kuwa badan) ee saadaasha qalabka, in kasta oo aan runtii u arko tixgalinta aragtida fiidiyowyada ee aanan ka gaabin doonin sameynta iyo dhajinta on YouTube, Runtii waxaan u maleynayaa inay waxtar leedahay in wax la sii odoroso.
Sida loo saacadeeyo khadka tooska ah ee roulette: Calaamadaha roulette
Roulette Clock Master waxaa ku qalabaysan 2 nooc oo calaamado kala duwan ah, oo loogu magac daray # 1 iyo # 2.
Calaamadaha taxanaha ah # 1 waa laba jibbaarayaal lambarro u ah 1 illaa 6 iyo wareegyo yaryar oo yaryar, oo lagu daray mid buluug khafiif ah. Waa lagu jiidi karaa shaashadda oo waxaa loo isticmaali karaa in lagu xadido, tusaale ahaan, 6 qaybood oo giraangirta ah, halka wareegyada loo isticmaali karo in lagu garto lozengesyada kala duwan, taasi waa barta ay kubaddu ka dhaceyso ka hor inta aysan ku dhicin rotor-ka.
Wareegyadan cad waxay sidoo kale isku rogi karaan cagaar, kaliya ku guji dusha jiirka.
Qeybtaan ugu horeysa ee calaamadaha waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro ilaahyo qaybaha tixraaca waayo goorma ayaad diiwaangelin doontaa daah-furyada oo dabcan waxaan kugula talinayaa inaad kormeerto had iyo jeer marka la raacayo liistada u dhiganta, ee ku saleysan jihada wareegga saacada / dhanka bidix ee giraangirta.
Tusaale ahaan, waxay noqon doontaa mid waxtar leh in la ogaado in haddii joogsiga saacaddu ay kubaddu aad ugu dhowayd dhibicda huruudda ah (eeg sawirkii hore), eber (si loo raad raaco booska giraangirta) qaybta ay calaamadeeyeen calaamadaha 2 -1 iyo lambarka guuleysta (oo qiyaasaya in 19 lagu raadiyey wareegga cagaaran) oo u dhow calaamadeeyaha 01, marka laga hadlayo kubbadda / shaagagga la midka ah waxaad ka fekeri kartaa inaad sharad ku sameyso qaybta 12 lambar oo u dhexeysa 3 ilaa 34 ama kiiska lambarada uu joogsiga kuu soo bandhigi doono sawirkaaga waqtiga joogsiga Saacad
Sida loo saacadeeyo khadka tooska ah ee khadka tooska ah: saacadda
Sida for saacad, Kaliya gali waqtiga aad rabto sanduuqa gaarka ah guji badhanka Start si aad u bilowdo fiidiyowga iyo saacadda saacadda saacadda.
Markaad gaarto qiimaha la tilmaamay, fiidiyowgu wuu istaagi doonaa adiga oo kuu oggolaanaya inaad fahanto meesha kubbadda iyo giraangiruhu ku jiraan isla markaana aad u hagaajiso
Dhamaan taxanaha # 2 ee calaamadaha waxay u heellan yihiin raadinta kubbadda guuleysta / giraangirta / lambarka.
Xaqiiqdii, waxay yihiin astaamo qaabab iyo midabbo kala duwan ah si ay kuu oggolaadaan inaad ku doorato kuwa aad doorbiddo iyadoo loo eegayo dookhaaga shakhsi ahaaneed.
Midabyo isku mid ah oo ka kooban kooxo ka kooban 3 calaamadeeye ayaa loo isticmaalaa in lagu kala sooco hal wareeg oo kan kale ah.
Asal ahaan, waxay ku saabsan tahay sidan: mar alla markii aad joojiso fiidiyowga wareegga, tusaale ahaan jihada saacadda, waxaad calaamadeyneysaa kubbadda, mid ka mid ah eberka giraangirta iyo mid lambarka markaa ku guuleysanaya.
Ku soo celi qalliinka 3 ama 4 jeer oo kale ka dibna bilow ciyaarta, ujeeddadiisuna tahay oo keliya haddii joogsiga fiidiyowga ay ka jirto xaalad la mid ah tii la duubay ee la xiriirta booska kubbadda / giraangirta.
Xaqiiqdii iyaguna way jiraan farsamooyinka kale ee lagu ciyaaro, sida ujeedka qaybta lixda lambar ee aadka u saameeya joogsiga fiidiyowga, ama ka soo horjeedka, taas oo ah, ka ciyaarista qaybta qabow (waligaa ha garaacin), dhammaantood sidoo kale si loo joojiyo wejiyada soo noqnoqda ee bilaabista in qaar ka mid ah croupiers-yada ay lama huraan abuuraan; dhanka kale ka feker ... haddii ganacsadaha la beddelo celcelis ahaan 30 daqiiqo kasta, sidoo kale waxaa jiri doona sabab!
Xadka ugu dambeeya ee saacadda roulette?
Qaabkan ugu dambeeyay ee Roulette Clock Master Waxaan ku daray qaab cabbiraad cusub.
Ficil ahaan adoo riixaya badhanka DS (Saxeexa Ganacsade), barnaamijku wuxuu muujinayaa oo keliya Xawaaraha Xawaaraha iyo guddi leh 12 roulettes (Waqtiga 01, Waqtiga 02, iwm.).
Farsamadu waa tan: marka hore waa inaad cabirtaa celcelis ahaan jeer tuurid, taasi waa in la fahmo ka dib inta milliseconds laga bilaabo bilowga kubbadda fiidiyowga waa in la joojiyaa, si loo helo 'ugu yaraan' mid kale oo 2 ilbiriqsi ah oo lagu sharfo ka hor dhamaadka sharadka.
Marka tan la sameeyo, dooro mid ka mid ah 12 roulettes oo leh qaabka ugu habboon oo xulo shaashadda ku habboon guji.
Waqtigan xaadirka ah ayaa dejinta la dhammeeyaa, kaliya bilow saacadda iyo mar kasta oo fiidiyowgu istaago, ku sharfo qaybta la mid ah booska tixraaca ee aad horay u dooratay 12 ka mid ah ee la heli karo.
Hawlgalku wuu ka fudud yahay sida ay u muuqan karto, haddii aad wax shaki ah ka qabtid, waxaan kugu martiqaadayaa inaad si dhakhso leh u daawato fiidiyaha muuqaalka ah ee durba laga helay kanaalka ► YouTube di ThatsLuck.
Cusub cusub Roulette Clock Master waa ujeeddooyinka oo dhan shaybaar iyo, sida oo kale, waxay ku siinaysaa suurtagalnimada dhabta ah ee soo-saarista iyo adeegsiga farsamooyinka saadaalinta ee guuleysta ee gebi ahaanba cusub, iyadoon daruuri la wadaagin; halkan laga bilaabo, sidaad fahmi doontid, waxay ka soo baxdaa qiime dhaqaale oo ka duwan kan dhammaan barnaamijyada kale ee la heli karo.
Intaas waxaa sii dheer, mahadsanid nooca barnaamijyada loo isticmaalay, barnaamijkan loogu talagalay roulette saacad weligiis way shaqeyn doontaa, maxaa yeelay waxay si toos ah ula falgashaa shaashadda ciyaaryahanka oo aan la xiriirin koodhka software-ka.
Soo Degso Fayl	ClockMaster.zip - 2 MB